तीन जनाको सामूहिक हत्या : तिहारमा सिङ्गो गाउँ शोकमा - The Times of Nepal
सहकारीका पाँच लाख कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुँदै
सबै नेपालीको घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न गुरुयोजना ल्याइने’
सूचनामा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड
राष्ट्रपतिद्वारा नानक जयन्तीको शुभकामना
सचिवालय बैठक : नेपाल–भारत सीमा विषयमा सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ
पाँच किलो गाँजा बरामद
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि चुनावी प्रचारमा तीव्रता
बेसहारा सडक मानवमुक्त नगर अभियान
१२ कार्तिक २०७६ मा प्रकाशित
बैतडी, १२ कात्तिक : सबैतिर तिहारको रौनक छाइरहेका बेला बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–४ र ५ भने तीन जनाको सामूहिक हत्यापछि सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । भारतको पिथौरागढमा मजदुरी गर्दै आएका पुर्चौंडी नगरपालिका–५ दहतोलीका ३६ वर्षीय हरे बोहरा र २७ वर्षीय वीरा बोहरा तथा पुर्चौंडी नगरपालिका–४ भटना तडीखेतका ३६ वर्षीय कासी बोहराको हत्या भएपछि सिङ्गो गाउँ शोकमा डुबेको स्थानीय तथा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख धनबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सबैतिर तिहारको रौनक छ तर यहाँका बोहरा गाउँ भने शोकमा डुबेको छ ।” रोजगारीको लागि भारतको पिथौरागढमा रहेका उनीहरु तीनैजनाको कात्तिक ८ गते पिथौरागढको सिलौल मड भन्ने स्थानमा लिङ्ग काटेर हत्या भएपनि गाउँमा भने कात्तिक १० गते मात्रै खबर प्राप्त भएको थियो ।
हरे बोहरा र बीरा बोहरा सहदोर भाइ हुन् । उनीहरु पिथौरागढको सिलौल मड भन्ने ठाउँमा गएको डेढ वर्षयतादेखि मजदुरी गर्दै आइरहेका बताइएको छ । बीरा बोहरा तथा हरे बोहराका ७० वर्षीया आमा मनोरी बोहरा गाउँमै बस्दै आएको पुर्चौंडी नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष नागीसिंह खडायतले जानकारी दिनुभयो । वीरा बोहराका श्रीमती छोराछोरी भने कैलालीको फूलबारीमा बस्दै आएको बताइएको छ । वीरा बोहरा केही महिना अघि मात्रै दाजु भाउजु भेट्ने भनेर पिथौरागढ गएका थिए ।
मृतक हरे बोहराका श्रीमती कीर्रा बोहरा पनि मजदुरीका लागि भारतमै सँगै रहेका भएपनि उनी घटनापश्चात फरार रहेकी छन् । कीर्रा बोहरा भने बझाङ पुगेको खबर प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख धनबहादुर बोहराले बताउनुभयो । कीर्रा फरार रहेकाले हत्यामा उनको संलग्नता रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई उद्धित गर्दै भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । कीर्रा पहिलाको श्रीमान्लाई छोडेर हरे बोहरासँग बिहे गरेको उनका आफन्तले बताएका छन् ।
स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा बैतडीका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका युवा रोजगारीका लागि भारत पस्ने गरेका छन् । रोजगारीको लागि भारत गएका युवा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । हत्या गरिएका तीनै जना मजदुरमध्ये एकजना कासी बोहराको शव आफन्तले बुझेका छन् भने दुई शव अस्पतालमै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । हत्याको विषयमा भारतीय प्रहरीसँग सहयोग आदानप्रदान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । घटनाबारेमा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई पिथौरागढ पठाइएको छ ।
फूल खेतीको आकर्षण बढ्दो : अवलोकन गर्न आउनेको चहलपहल बढ्दै
अस्तित्व गुमाउने अवस्थामा जनकपुरधामको ऐतिहासीक पोखरीहरु	- किशन साह
छठपर्वमा सूर्य र छठी माताको एकैसाथ पूजा : छठ माता को हुन् ?	- – प्रभाषचन्द्र झा
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने खबरले खुशियाली	- द टाइम्स अफ नेपाल
भारतसँग जोडिएको सीमा स्तम्भ अनुगमन गर्नै मुश्किल!	- द टाइम्स अफ नेपाल
एउटै वडामा अढाई करोडको केराखेती	- रासस
राहदानी फ्याँकेर अटो समाउँदै रोल्पाली युवा	- द टाइम्स अफ नेपाल
सचिवालय बैठक : नेपाल–भारत सीमा विषयमा सरकारले स्पष्ट पारिसकेको...